करिब एक बर्ष अघिको त्यो घटनाले लिएको रहेछ अहिले ६ जनाको ज्यान , के थियो त्यो घटना? यस्तो सम्म पो भएको रहेछ ! – Kavrepati
Home / समाचार / करिब एक बर्ष अघिको त्यो घटनाले लिएको रहेछ अहिले ६ जनाको ज्यान , के थियो त्यो घटना? यस्तो सम्म पो भएको रहेछ !
admin 1 week ago	समाचार Leaveacomment 314 Views
काठमाडौँ । संखुवासभाको उम्लिङमा एकै परिवारका ६ जनाको सामूहिक ह ‘त्याका आरोपी लोकहादुर काकीले पीडितमध्ये एकमाथि ह ‘त्याको आशंका एक वर्ष अघि देखि गरेको खुलेको छ । प्रहरीसँगको बयानमा लोकबहादुरले काका पर्ने तेजबहादुरले एक वर्ष अघि आफ्नी आमाको ह त्या ग ‘रेको आशंका गरेको बयान मार्फत भनेका छन् ।
लोकबहादुरले तेजबहादुरमाथि आफ्नी आमाको ह’त्या ग’रे’को आशंका समेत गरेका थिए । तेजबहादुरकै घरमा उनकी आमा ल’डे’को कारण आशंका गरेका थिए । पछि उपचारका क्रममा आमाको मृत्यु भएको थियो ।
२१ भाद्रमा एका बिहानै संखुवासभाको मादी नगरपालिकास्थित उम्लिङमा एकै परिवारका छ जनाको ह’त्या भ’ए’को थियो । घरमूली ९० वर्षीय वृद्ध बौद्धमान कार्की मात्र जिवित भेटिएका थिए । बौद्धमानकी ८४ वर्षीया पत्नी पार्वती कार्की, ५२ वर्षका छोरा तेजबहादुर कार्की, बुहारी ५२ वर्षीया कमला कार्की, नातिनी बुहारी ३२ वर्षीया रञ्जना कार्की, पनाति वर्ष ८ का विपिन कार्की र पनातिनी वर्ष ५ की गोमा कार्की मृत फेला परेका थिए ।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा तेजबहादुरको घरमा र’ग’त ला’गे’को सर्ट र ह’त्यामा प्रयोग भएको ह्यामर फेला परेको थियो । सबै प्रमाण संकलन गरेपछि तेजबहादुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । मानसिक रोगी भएको भनिएका लोकबहादुरले औषधी सेवन गर्दै आएको खुलेको छ ।
२१ भाद्रको विहानै पाँच बजे खेताला खोज्न हिंडेका तेजबहादुरलाई पछाडिबाट टा’उकोमा ह्या’मरले हि’र्का’एर ह’त्या गरेका थिए । ह्यामरले हि’र्का’उँ’दा तेजबहादुर चि’च्या’ए’पछि परिवारका अन्य सदस्य पनि आएका थिए ।
तेजबहादुरकी पत्नी कमला कार्की र बुहारी रञ्जना कार्कीले ह’त्या ग’रे’को देखेपछि दौडदै आएको र उनीहरुको पनि ह’त्या गरेका बयान दिएका छन् । दुवैलाई ह्या’म’रले हि’र्का’एका थिए । यो दृश्य ८ वर्षीय विपिन कार्की र ५ वर्षीया गोमा कार्कीले पनि देखेपछि उनीहरुको पनि ह’त्या ग’रे’का थिए ।
ह’त्या ग’र्न खोज्दा विपिन र गोमा भागेका थिए । उनीहरुको ल’खे’टेर ह’त्या ग’रे’को बयान लोकबहादुरले दिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । त्यसपछि घरमा बसेकी ८४ वर्षीया पार्वती कार्कीको पनि ह’त्या गरेका थिए । बुद्धमान कार्की कान नसुन्ने भएकाले केही थाहानपाएकाले छा’डि’दि’एका थिए ।
Next अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ र प्रकाशको भिडियोले तहल्का मच्चाउँदै [भिडियोसहित]